Siyaasi Mustafe Martin oo ku baaqay in Somaliland deg deg loo badbaadiyo - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Siyaasi Mustafe Martin oo ku baaqay in Somaliland deg deg loo badbaadiyo
Siyaasi Mustafe Martin ayaa ku baaqay in Somaliland la badbaadiyo.
Kicitaan Qaran, Badbaado Qaran oo Degdega ayaan Ku dhawaaqay maanta oo ka Billabanta Gobalda Oo dhan Maalinta ilaa Awdal, Maroodo Jeex, Togdheer, Sool iyo Sanaag Dhaarta Dawlada Cusub Taas oo Loobaahan Yahay In lagu soo celiyo Dimiqraadiyadii Umada iyo wada Noolaanshahii Somaliland.1. Markii Dhiig Ku daatay Codkii Umada ee Laboobay.
2. Mar hadii la cabudhay Xoriyadii iyo aftidii dadka. dadkii la ugaadhsanay, la xidh xidhayo, ama Airportka wadanka Loo fadhisanyao.
3, markii hadiinla goostay inay soo noqoto dawlad beelaysan oo 7 sanadood wadanka boobtay dadka iyo umnadana dhaawacday oo burburisay jiritaanka Somaliland.
4. Marhaday naan Qaadan karay 30 Sadood oo kale oo ah Dawladii Kumiyeyesan oo Hagbadaysan.
5. Mar hadaad ogtahiin Boqolaalka Qof ee aan codkoodii la tixgelin iyo dareenka shacabka Somaliland.
6. Mar hadaad ogtahiin inaad diidi kartaan oo codkiinu ka dheer yahay dawladu musuq maasuqeeda.
7. mar haday yaaliin dhaawacyadii dadku dhakhtarada magaalooyinka waawayn ee Burco , Sanaag, Marroodi Jeex.
8. Mar hadii maanta magaalooyinkeenii la tubay Kaarayaayl iyo ciidan aad moodo in ay la dagaalamayaan cadowga Somaliland.
9. Marhadii tabi ay socot aad ilaawi doonto Somaliland oo ay dhawaana Iibsanayaan Xisbiyada Dhamaantood oo ay adkaan doonto Codayn bambe ilaa aynu ka dhiidhino oo soo cesho codkeenii iyo wanaageenii iyo nabad gelyadeenii.
10, Mar haday iyagu dhaawaceen sinaantii, cadalaadii, iyo nabad gelyadii dadka oo ay iyagu horseedayaan dhibka, dilka, dhaawaca iyo dawlad qori usi dhiibka.
11. Marhadaynu joogno Gobalda iyo wadanka waa inaynu dhamaanteen bilaabnaaa banaanbaxii abid ugu waynaa ee ka dhaca Somaliland Maalinta Dhaarta, Bannabaxaasi waa inuu ka dhacaa Gobolada Oo dhan si Nabad gelyo Leh oo aynu cabirayno Dareenka Shacabka, taas oo ku xardhan qoraalo muuqdheer oo yeedhitaankoodu yahay diidnay, dooni mayno, aqbalimayno.
12. Dareenku Shacabku waa inuu xor ka ahaado Xisbiyada Mucaaridka Madaxdooda Sida Wadani iyo UCID. Walalyaal Maanta waxaad helaysann mid aynu doonayaynay mudo dheer oo ah In ay Sadexda Xisbi mar ina wada Dhaafaan madaxdoodu. Waxaynu heli doonaa bilow dambe oo cusub oo dadka wax bartay wadanka maamulaan
13. Dareenku Shacabku waa Mid ay u dhanyahiin Dadka reer Somaliland ee danaynaya danaha, SL, Dadka, SL, Danyarta SL, Degaanad SL,
13. waxan balan idiin qaadayaan inaan lagu degdegin dhaarta dawlada beenta ah ee dib loogu soo noqdo shacabta Somaliland.
14. Waxan Diyaar u Ahay inaan idinku horkacao dareenka shacbka Somaliland.
15. sidoo kale waxan kawadnaa banaan baxii abid ugu waynaa dalka Maraykan, Gaar ahaan Gobalda Minnesota, Washington, Ohio and Wadamada Reer Galbeedka Ah oo dhan.
17. Wadanka inagaa Leh, dadku waa dadkeenii, Dareenku waa keenii ha lamideeyo dadka oo halaga soo horjeesto siyaasadacusub ee Layiraahdo “Clan Dictatorship”
18. No More Clan Dictatorship”
19. Lasocda Interview is dabad Jooga oo ka baxa TV oo aan ku jihayno dareenka Shacabka oo aynu kuwada shaqayno. waxan kalsooni buuxda idinku siinayaa inaan dib u soocelino xoriyada wadanka, dadka, iyo dalka.
20. Maanta Masuuliyadeedad Adigaa Leh, Anigaa Leh, inakaa Leh
21. Maanta, Waaynu Diidnay, Beirto Waaynu, Diidnay, Saadambana Waaynu Diidnay, Naf iyo Maalba Waanu U horaynaa. Ilaalin mayno nabad gelyo kii wadanka dhacay ee boobay ee weliba qoryaha la dultaagani umada uu rabo inuu yidhaahdo nabad gelyada ilaaliya. taas macnaheedu maaha dad shacabaa is deliya waa wax kasta oo ay gaadhayso waanu ku badbaadinaynaa wadank iyo dadka sidaa aanu berigii horeba u badbaadinay wadanka.
Mustafe Martin Mohamed